सिल्ल्टले वेब पेजहरू स्क्रैप गर्न चार अद्भुत प्लगइनहरू प्रस्तुत गर्दछ
GitHub एक उन्नत वेब स्क्रैपिंग कार्यक्रम हो; यो प्रायः कम्प्यूटर कोडहरूको लागि प्रयोग गरिन्छ र यसको प्रयोगकर्ताहरूको स्रोत स्रोत व्यवस्थापन (SCM) प्रकार्यताहरू प्रदान गर्दछ. यसले तपाईंलाई ठूलो वेब पृष्ठहरूको पहुँच गर्न र तपाईंको आवश्यकता अनुसार तिनीहरूलाई स्क्रैप गर्न अनुमति दिन्छ. GitHub दुवै निजी उपयोगहरू र नि: शुल्क भण्डारहरूको लागि योजनाहरू प्रदान गर्दछ. तपाईं यस उपकरणको साथ विभिन्न डेटा निष्कर्षण कार्यहरू गर्न सक्नुहुन्छ. GitHub ले 40 मिलियन भन्दा बढी वेब पेजहरू स्क्रैप गर्न दावी गरेको छ र विश्वभरि लगभग 10 मिलियन प्रयोगकर्ताहरू सेवा गरेको छ.
वेब पेजहरू स्क्रैप गर्न चारवटा प्लगइनहरू:
1 - como recuperarasenha do administrador joomla themes. Google Plus Authorship:
Google Plus Authorship एक फाईल प्लगइनको साथ धेरै सुविधाहरू र क्षमताहरू छन्।. यसको साथ, तपाईं धेरै वेब पेजहरू स्क्रैप गर्न सक्नुहुन्छ जस्तो तपाईं चाहानुहुन्छ. पहिला, तपाईंले वेबसाइटहरू जुन स्क्रैप गर्न चाहानुहुन्छ भन्ने पत्ता लगाउनु र पहिचान गर्नु पर्छ. अर्को चरण डेटा हाइलाइट गर्न वा साइटको यूआरएल सम्मिलित गर्न, र यो प्लगइनले यसको प्रकार्य प्रदर्शन गर्न अनुमति दिन्छ. यो GitHub सँग एकीकृत गर्न सकिन्छ र एक हप्तामा पाँच हजार वेब पृष्ठहरू स्क्रैप बिना, गुणस्तरमा सम्झौता नगरेसम्म. यसबाहेक, यो प्लगइनले परिणामहरू खोज्नका लागि G + प्रोफाइल चित्रहरू थप्न अनुमति दिन्छ, विभिन्न लेखकहरूको लेखकत्व प्रदान गर्नुहोस् र तिनीहरूको प्रमाण पुष्टि गर्नुहोस्।. यसमा एक प्रयोगकर्ताको अनुकूल इन्टरफेस छ र तपाईंको लागि पढ्नयोग्य र स्केलेबल डेटा निकाल्न सक्छ.
2. फीड ढीले:
फीड ढीली एक राम्रो वर्डप्रेस प्लगइन मध्ये एक हो. यो सानो र मध्यम आकारका व्यवसायहरूको लागि उपयुक्त छ र तपाईले चाहानुहुन्छ धेरै वेब पेजहरू स्क्रैप गर्न सक्नुहुन्छ. यसबाहेक, फिड विलम्ब सामग्री ले उठाउँछ, यसलाई स्क्रैप गर्दछ र यसलाई उपयुक्त एट्रिब्युसनसँग प्रकाशित गर्छ, यसको सम्भावना गर्नका लागि यसको बटहरू र क्रलरहरू धन्यवाद।. यसको सुरुवात पछि, फिड विलले सफलतापूर्वक तीन मिलियन भन्दा बढी वेब पृष्ठहरू स्क्रैप गरेको छ, र यो नम्बर दिन बढ्दै गएको छ.
3. फीड-स्क्रैपर सन्देश:
स्क्रैपिंग र डेटा निकासी मुख्य रूप देखि मानव बाट कुनै पनि निगरानी बिना बोट्स वा क्रलरहरू संग प्रदर्शन गरिन्छ।. फीड-स्क्रैर सन्देशको साथ, तपाईं केवल वांछित वेब पृष्ठहरु लाई स्क्रैप गर्न सक्नुहुन्न तर तपाईको वेबसाइट क्रल गर्न र यसको खोज इञ्जिन रेटिङ सुधार गर्न सक्दछ।. यो तपाईंको GitHub सफ्टवेयरसँग एकीकृत हुन सक्छ र उद्यमहरू, प्रोग्रामरहरू र वेबमास्टरहरूको लागि उपयुक्त छ.
4. प्रतिलिपि अधिकार नि: शुल्क प्लगइन
यो अझै अर्को अद्भुत वर्डप्रेस प्लगइन छ जुन धेरै सुविधाहरू छन्. प्रतिलिपि अधिकार नि: शुल्कको साथ, तपाईं धेरैजसो वेब पेजहरू स्क्रैप गर्न सक्नुहुन्छ जस्तो तपाईं. यो प्लगइनले प्रमाणपत्र प्रदान गर्दछ यदि कसैले हाम्रो सामग्री चोरी गरिरहेको छ भने. यो सबै वर्डप्रेस साइटहरू र निजी ब्ल्यागहरूसँग मिल्दो छ र तपाईले राम्रो समयमा संरचित डाटा पाउँदछ. साथै, तपाइँलाई प्रोग्रामिङ वा कोडन कौशलहरू पाउने आवश्यकता छैन र यस सेवाबाट कुनै पनि समयमा र जहाँ पनि पनि लाभान्वित हुन सक्छ.
गित हब प्लेटफर्मको विकास अक्टोबर 2007 मा सुरु भयो. GitHub मा परियोजनाहरू पहुँच गर्न वा गित कमाण्ड-लाइन इन्टरफेसको साथ हेरफेर गर्न सकिन्छ. यसले हामीलाई वेबसाइटमा सार्वजनिक भण्डारहरू ब्राउज गर्न दिन्छ र विभिन्न प्रकारका कार्यहरू सजिलै प्रदर्शन गर्दछ. उपरोक्त प्लगइनहरू एसएसएस फीडहरू, सोशल मिडिया साइटहरू, समाचार पत्रहरू, यात्रा पोर्टलहरू र निजी ब्लगहरूबाट स्क्रैप डेटा गर्न सक्छन्।. तपाईले इच्छनीय ढाँचामा डेटा स्क्रैप गर्न व्यक्तिगत खाता सिर्जना गर्नुपर्छ, तथापि सार्वजनिक भण्डार ब्राउज गरिन्छ र कुनै पनि खाता बिना डाउनलोड.